Xasan Xaydh Oo Dhoolatuskii ugu dhumucda balaadhnaa ku soo bandhigay Hargeysa | Somaliland.Org
Xasan Xaydh Oo Dhoolatuskii ugu dhumucda balaadhnaa ku soo bandhigay Hargeysa
November 17, 2012	“Tartanka waa la kala badiyaa.laakiin waxa noo cad inaanu badinayno doorkan” Hargeysa (Somaliland.Org)- Urur siyaasadeedka WADDANI ayaa maanta cududa taageereyaashiisa caasimadda Hargeysa ku soo bandhigay isu soo baxyo balaadhan oo 25-kiisa Murashax ee caasimadda Hargeysa ay si gooni gooni ah ugu qabsadeen xarumahooda.
Dhoolatuskii ugu dhumucda weynaa ee WADDANI waxa saaka Murashax Xasan Cabdi Maxamuud (Xasan xaydh) ku qabsaday maqaamka Sh. Madar ee degmadda Gacan Libaax, halkaasi oo Hoggaanka WADDANI kala hadleen Taageereyaal aad u tiro badan oo halkaasi iskugu soo baxay.
Waxa ugu horayn halkaasi ka hadlay Xildhibaan Xasan Cabdi Maxamuud oo ka mid ah Golaha deegaanka ee wakhtigiisu dhammaaday hase yeeshee dib iskugu soo sharaxay xilkaasi mar kale, waxaanu yidhi “Anigu waxaan ka sharaxan nahay xisbiga WADDANI, ha mooodina inaan hilmaamay maanta urur ma aha ee waa xisbi WADDANI. waxaan aaminsan nahay markii aan eegay cududa WADDANI ee gobolada oo dhan ka eegay, waxaan arkaa WADANI inuu yahay xisbi. waxaanan aaminsan Nahay haddii aan la is boobaynin oo si xor iyo xalaal wax loo kala saaro in inuu kow yahay WADANI.”
Xildhibaan Xasan Xaydh waxa uu sheegay in taageereyaashiisu joogaan shanta degmo ee Hargeysa oo uu dhammaantood ka doonayo cod,waxaanu yidhi “Aniga oo Xasan xaydha ah intiinan iyo in kale oo badanba waa I garaneysaan, waxaan ahaa nin toban sanno ku soo jiray golaha deegaanka Hargeysa. hadaba deegaanku waa deegaan oo gobol walba degaan buu lee yahay degaanka Hargeysa ayaan anigu ku soo jirey. Maantana Hargeysa ayaan wax ka doonayaa xaafad iyo degmo midna wax kama doonayo ee taageerayaashaydu waxay joogaan shanta degmo ee magaalada Hargeysi ka kooban tahay.”
Xasan Xaydh oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxaan ahay nin odaya oo lixdanka gaadhay ayaan ahay toban sannadoodna soo joogay haddii aanan gobolka dhisin dee ma aha inaan isa soo taago ee kalsooni aan isku qabo oo aan dadkayga ku qabo ayaan isku soo taagay. kuwan yidhaahda wax baanu qabaneynaa kuma jiro nin ila da’a ah ama igu soo dhow. inan yar oo shan iyo labaatan jira oo xaynkii hooyadii wali aan ka bixin Hargeysa waxba u qaban maayo wax uu yeelo mooyee waxba tari maayo.”
Nin waliba calaamad ayuu leeyahay. anigu calaamadeydu waa wax qabadkaygii hore ka dambe ku dari maayo inaan ka sii badiyo mooyaane. wadooyinkaa degmada Kood-buur iyo 26juun laga hirgaliyey anigaa hormood ka ahaa magac mooyee manfac kama doonin inaan taas sii kor dhiyo ayuun baan doonayaayoo, ta danbena waxaan doonayaa haddii naftu igusinto inaan isku soo sharaxo madaxweyne.”
“Waxaan musharax u ahay bacadyaalka iyo danyarta. waxaan musharax u ahay shanta degmo siiba waxaan mushax u ahay degmooyinka G/libaax, 26Juun iyo Koodbuur, waad ogeydeen waxaan idiin qabtey anigoo xildhibaan ah bal maxaydun u maleyn hadaan kursiga Jiciir fadhiistana, waxaan idiin sheegayaa inaan maanta u socdo maayar, halkaan wax ka qaban arona waa halkaa qabyaaladna kuma shaqeeyo, waxaa kaloo idiin sheegayaa marka doorashada codka la dhiibanayo wax calaamdi ma jirto ee lambar ayaa jira lamberkeygu waa 611.haddii aan anigu soo baxo waxaan doonayaa kursiga Ina Jiciir ku fadhiyo ee maayarnimadda Hargeysa, ”ayuu yidhi Xasan Xaydh.
Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Somaliland ahna Guddoomiyaha urur siyaasadeedka WADDANI Md.C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay taageereyaasha murashax Xasan Xaydh, waxaanu u soo jeediyay inay soo saaraan Xildhibaankan oo waayo arag ah.
Guddoomiyuhu waxa uu xusay in guusha Xildhibaan Xasan Xaydh iyo guusha WADDANI isku xidhan yihiin.
“Walaalayaal waad mahadsan tihiin saacado badan ayaan qoraxda joogteen. Waxaan idin leenahay aad iyo aad ayaan u mahadsan tihiin. Waxaynu u baahan nahay inaynu ilaalino dhaqanka islaamiga ah iyo shuruucda doorashada oo aynu ixtiraamno murashaxiinta iyo axsaabta kale ee inala tartamaysa. Waayo cadaawad midnaba uma hayno waana walaalaheen,”ayuu yidhi Md. C/Raxmaan Cirro.
Guddoomiyaha Ururka WADDANI waxa uu ku dooday in u cadahay inay badinayaan, isagoo arrintaasi ka hadlayayna wuxuu yidhi “Tartanka waa la kala badiyaa.laakiin waxa noo cad inaanu badinayno doorkan.”
Sidoo kale, waxa halkaasi ka hadlay Xoghayaha guud ee Ururka WADDANI Maxamed Cabdilaahi Uurcadde iyo Wasiirkii hore ee warfaafinta Md. Axmed xaaji Daahir Cilmi waxaanay labaduba taageereyaasha uga warameen barnaamijkoda siyaasadeed, waxaanay ku booriyeen inay soo saaraan Xildhibaan Xasan Xaydh oo ka mid Golaha deegaanka Hargeysa isla markaana mar kale isku soo sharaxay Golaha deegaanka. Waxaanay Xasan Xaydh ku tilmaameen siyaasi ruug cadaa ah oo wax ka bedeli doona caasimadda Hargeysa.
Geesta kale, waxa Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda ahna Hoggaamiyaha Urur-siyaasadeedka WADDANI Md.C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi uu xadhiga ka jaray Xafiisyo uu Xildhibaan Xasan Xaydh ka furtay xaafadaha cabeeye, Idaacadda, Sh. Cumar iyo Faluuja, halkaasi oo ay masuuliyiinta WADDANI iyo murashaxaasiba khudbado uga jeediyeen Boqolaal ka mid ah taageereyaashooda xaafadahaasii.
Previous PostDeel-qaafka Jamaal Muxuu Daaran Yahay? By Sacad XarbiNext PostGoboladda dalka iyo Jawigii Ololaha Ururka WADDANI	Blog